Aiza no haleha amin'ny volana Mey: Toerana 10 tsara indrindra eran'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 18/05/2021 10:25 | Toerana fitsangatsanganana, mpitarika
Tianay hambara aminao amin'ity lahatsoratra ity ny toerana tokony halehantsika amin'ny Mey: ny tanjona folo voalohany. Tsotra dia tsotra ny antony: mitondra lohataona tsara ny lohataona, lava kokoa ny andro ary manomboka miakatra ny mari-pana. Toy ny hoe tsy ampy izany rehetra izany, ny vanim-potoana orana dia mbola tsy nipetraka tany Azia ary ny ririnina dia mbola tsy tonga tany Amerika Atsimo.
Izany rehetra izany dia miteraka dia lavitra ny fitsangatsanganana amin'ny volana Mey. Ankoatr'izay, ny trano fandraisam-bahiny mazàna dia mora kokoa noho ny amin'ny fahavaratra ary toerana maro no mankalaza fiestas tena mahaliana. Raha manampy an'izany rehetra izany ianao dia vitsy ny faritra fizahan-tany noho ny tamin'ny Jolay na Aogositra, dia misy antony marobe hieritreretana momba ny toerana halehanao amin'ny Mey. Hasehonay anao ny toerana tsara indrindra folo hanao izany.
1 Aiza no haleha amin'ny volana Mey: Toerana 10 tsara indrindra, avy any atsimon'i Espana ka hatrany amin'ny torapasika any Filipina
1.1 Prague, toerana mozika haleha amin'ny volana Mey
1.2 Porto: aiza no hivezivezena amin'ny Mey raha zavatra hafa no tadiavinao
1.3 Normandy, tany misy hantsana mahatalanjona
1.4 Seville, haitraitra tena akaiky
1.5 Filokana tsara foana i New York
1.6 Sipra, firavaka ao amin'ny Mediteraneana
1.7 La Palma, dia hafa mankany amin'ny Nosy Canary
1.8 Bantayan, ny fiadanan'ny nosy Filipina
1.9 Córdoba, tanànan'ny Tanànan'i Caliphal
1.10 Costa Rica, tanin'ny valan-javaboary voajanahary
Aiza no haleha amin'ny volana Mey: Toerana 10 tsara indrindra, avy any atsimon'i Espana ka hatrany amin'ny torapasika any Filipina
Ireo toerana izay hatolotray anao dia misy ny endrika manonofinofy, torapasika tsy manam-paharoa, tsangambato maro ary fety nentim-paharazana izay malaza eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Hanomboka ny fitsidihantsika ny toerana itetezana azy izahay amin'ny Mey.
Prague, toerana mozika haleha amin'ny volana Mey
Castle sy Katedraly Prague
Ny renivohitry ny faritra Tseky Bohemia Ity no tranonkala voalohany omenay hevitra anao. Toy ny hoe tsy dia nisy antony firy ny lova goavana nananany, nanomboka tamin'ny tapaky ny Mey ka hatramin'ny voalohan'ny volana Jona dia nankalaza izany izy Fetiben'ny mozika lohataona iraisam-pirenena. Orkesitra sy mpitarika lehibe mihaona ao an-tanàna hanao fampisehoana tsy hay hadinoina.
Noho izany, raha mpitia mozika ianao dia manome sosokevitra ny dia ho any Prague hankafizanao ity hetsika ity. Ary, eny, aza mitsahatra ny mitsidika ny distrikan'ny Castle sy Mala Strana, izay ahitanao tsangambato mahatalanjona toy ny Prague Castle, ny Katedraly St. Vitus na ny sarobidy Tetezana Charles. Aza adino koa ny mamaky Staré Mesto, ilay tanàna medieval izay hahitanao ny Lapan'ny tanàna taloha miaraka amin'ny famantaranandro malaza misy azy.
Porto: aiza no hivezivezena amin'ny Mey raha zavatra hafa no tadiavinao
Porto, toerana lavorary haleha amin'ny Mey
Angamba ny tanàna tsara indrindra any Portugal dia Lisboa ary ny morontsiraka tsara indrindra eto amin'ny firenena dia ao Ny algarve. Na izany aza, Porto koa dia manan-javatra betsaka hatolotra anao. Ho fanombohana dia nambara ny tanànany taloha Lova eran-tany ho an'ny fananganana toa ny katedraly, ny lapan'ny Stock Exchange, ny fiangonana sy ny tilikambon'i Clérigos na ireo tetezana maro ambonin'ny renirano Duero.
Fa, ho fanampin'izay, afaka mankafy ny terraces velona ianao Ny Ribeira, izay hanoloran'izy ireo anao ny mofomamy fanosotra malaza sy ireo divay Port tsy dia malaza loatra. Na dia, raha te hahalala ny fizotran'ny fanamboarana ity farany ianao dia manana orinasa mpamokatra divay maro any an-dafin'ny Duero.
Farany, aza mitsahatra mitsidika ny tranombakoka ao amin'ny tanàna Portiogey. Manoro anao izahay ny tamin'ny Moyen Âge, izay ao amin'ny Casa del Infante, tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo; ny iray an'ny Fiara elektrika, miaraka amin'ireo fiarany taloha, ary ny Soares do Reis National, izay mampiseho ampahany tsara amin'ny asan'ny mpanao sary sokitra manome azy ny anarany, iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny tantaran'ny Portiogey.
Normandy, tany misy hantsana mahatalanjona
Cliff of Étretat
Any avaratry ny Frantsa, Normandy dia tsara tarehy amin'izao fotoana izao. Raha mitsidika azy ianao dia hahita hantsam-bato mahavariana toa an'ireo Étretat, fa koa ny morontsiraka dia izay tsy mahita ny English Channel ary ny tontolo mahafinaritra hafa.
Azonao atao koa ny mahita tanàna manan-tantara toy izany Ruan, izay may Joan of Arc ary izany dia misy tsangambato toa ny Katedralin'i Our Lady, firavaka amin'ny fomba Gothic; ilay Abbey manaitra an'i Saint-Ouen sy ny Fiangonan'i Saint-Maclou, ohatra roa an'ny Flamboyant Gothic, ary ilay trano tsara tarehy Hotel de Bourgtheroulde, nifindra tamin'ny fomba Renaissance.
Fitsidihana iray hafa izay tsy azonao adinoina ao Normandy Le Havre, izay ivon-tantara manan-tantara dia Lova eran-tany ho an'ny katedraly Renaissance mampiavaka azy, ny tilikambo fanaovan-jiro ao amin'ny fiangonana Saint-Joseph sy ireo tsangambato hafa.
Fa ambonin'izany rehetra izany dia tsy afaka miala amin'i Normandy ianao raha tsy mitsidika ny nosy Mont Saint-Michel, izay mahafoy ny toetrany anaty rehefa mivoaka ny onja ary aiza no misy ilay tranon-jaza Benedictine manaitra io anarana io, izay manambatra ny fomba Carolingian, Romanesque ary Gothic.
Seville, haitraitra tena akaiky
Tsy mila miala any Espana koa ianao vao afaka misafidy ny toerana halehanao amin'ny Mey. Ny renivohitra Andalosiana dia toerana mahafinaritra hijerena lohataona. Ao Seville ianao dia manana tsangambato mahafinaritra toy ny mahavariana Katedraly miaraka aminy tsy latsa-danja Giralda; ny tilikambo volamena na ny Real Alcazar, firavaka izay manambatra ny fomba Gothic sy Mudejar.
Maoderina kokoa, fa tsy latsa-danja amin'izany koa ny Kianjan'i Espana, natsangana ho an'ny Ibero-American Exposition of 1929 ary manaitra ny habeny sy ny endriny. Aza adino koa ny mamakivaky ireo faritra manodidina azy toa ny Triana na izay Santa Cruz ary ho an'ny sarobidy Valan-javaboary Maria Luisa.
Saingy, ho fanampin'izay, manana tombony hafa i Seville amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fiandohan'ny volana may ny malaza fampisehoana, miaraka amin'ny jiro nentim-paharazana sy toerana ahafahanao mankafy ny divay sy ny mozikan'ny tany.
Filokana tsara foana i New York
Ny sarivongan'i Liberty
Manova firenena izahay ary na dia ny kaontinanta aza hanasa anao hitsidika an'i New York, filokana fitsangatsanganana izay tsy hahomby mandrakizay. Ny fotoana rehetra dia fotoana mety handehanana any amin'ny "tanànan'ny tranobe". Ao anatiny, azonao atao ny manomboka ny fitsidihanao Times Square, ny kianja malaza amin'ny efijery lehibe. Avy eo ianao dia afaka mitsidika ny manodidina azy ireo, indrindra Brooklin o Harlem, ary mamakivaky Central Park na mahita seho ao amin'ny Broadway.
Fa ny zavatra tsy hajanonao atao dia ny mahita ny Statue of Liberty, la nosy ellis, izay nahatongavan'ireo olom-pirenena eran'izao tontolo izao nitady ny nofinofy amerikanina ary tsangambaton'ny fifindra-monina, ary tranombakoka toa ny Metropolitan of Art, iray amin'ireo lehibe indrindra sy lehibe indrindra amin'ny karazany eto ambonin'ny planeta.
Sipra, firavaka ao amin'ny Mediteraneana
Ny toetra tsy mitovy amin'ny an'ny teo aloha dia manana ny toerana itondranay azy. Sipra dia fampifangaroana tsara amin'ny morontsiraka sy ny endrika mahavariana misy lova ara-tantara tsy manam-paharoa. Momba ny voalohany, manoro hevitra izahay Nissi y Makronissos, izay ahafahanao manao fanazaran-tena antsitrika scuba.
Raha ny momba ny vakoka, any Sipra ianao dia hahita monasiteran'ny Orthodoksa mahavariana toa ny an'ny Saint Irakleidios ary trano mimanda medaly toy ny an'ny Kolossi, namboarin'ny Knights of the Order of San Juan, akaikin'ny Iglesias toy ny an'ny Troodos massif, ekena ho Lova eran-tany.
Etsy ankilany, ao an-drenivohitra, Nicosia, manana tranombakoka mahavariana ianao ahafahanao mizaha ny tantaran'ny nosy manontolo hatramin'ny Neolithic ka hatramin'ny Ottoman. Nefa alohan'ny ahitanao ny rindrina medieval namboarin'ny Venetians, izay manodidina ny tanàna taloha izay azo alefa amin'ny varavarana toy ny Famagusta.
La Palma, dia hafa mankany amin'ny Nosy Canary
Roque de los Manyachos, ao amin'ny La Palma
Mba hamaliana ny fanontaniana momba ny dia haleha amin'ny volana Mey, manome sosokevitra iray hafa izahay nosy etsy ambany. Holazainao aminao ny momba an'i La Palma, iray amin'ireo tsy dia fantatra any amin'ny Nosy Canary, fa feno sary miavaka, torapasika nofinofy ary tanàna mahazatra.
Fantatra amin'ny "ilay nosy tsara tarehy"Raha mitsidika azy ianao dia ho afaka mankafy faritra feno fasika toa an'ireo Seranan'i Naos, Puddle maintso o Los Cancajos. Fa koa ala maitso maloto sy volkano mahatalanjona toy ny an'ny Nanana mpitari-dalana aho na ny Caldera de Taburiente, manodidina izay namoronana valan-javaboary iray manontolo.
Farany, ao amin'ny Santa Cruz de la Palma, renivohitry ny nosy, manana tsangambato toa anao ianao fiangonana any San Francisco sy Santo Domingo, hery toa ny Lapan'i Santa Catalina ary trano be voninahitra toa azy Lapan'i Sotomayor na ny Trano lehibe an'ny Salazar.
Bantayan, ny fiadanan'ny nosy Filipina
Sugar Beach, any Bantayan
Azia dia safidy mahaliana foana hiaina fialan-tsasatra tsara, ireo firenena be mpitsidika indrindra eto amin'ity kaontinanta ity Izy ireo dia tranon'ny toerana tsy mampino, fa raha azonao antoka fa tokony hanana moron-dranomasina ny toerana halehanao amin'ny volana Mey dia eritrereto ny handosirana mankany amin'ny nosy Bantayan any Filipina. Anisan'ireo torapasika nofinofisiny, izahay dia manoro hevitra an'izay Kota, miaraka amin'ny lelany fasika; Sugar's; ny an'ny Paradisa na ny henjana kokoa hitanao ao amin'ny nosy virjiny, izay azonao alefa amin'ny alàlan'ny fanofana ny iray amin'ireo sambo kely eo an-toerana, antsoina hoe bangka.
Tena tsy manana zavatra hafa tokony hatao ao Bantayan ianao. Ankoatra ireo faritra fasika voalaza etsy ambony, afaka mandeha ianao Omagieca Obo-Ob Mangrove Ecopark, toerana voajanahary honko manaitra. Na izany na tsy izany, ao anatin'ny toerana itodiana mankany Mey, ity dia iray amin'ireo morontsiraka tsara kokoa sy fitoniana bebe kokoa.
Córdoba, tanànan'ny Tanànan'i Caliphal
Fotoana tsara foana hitsidihana ny tanànan'i Andalusia any Córdoba. Tsy very maina, io dia iray amin'ireo manana tsangambato nambaran'ny maro Lova manerantany manerana an'izao tontolo izao. Saika tsy ilaina intsony dia ny filazanay aminao ny mahavariana azy MLittle, ny katedraly misahana ny asan'ny vadintsika ankehitriny; ny lova romanina; amin'ny tapany jiosy taloha izay mbola azonao atao ny mitsidika ny Tranon'i Sepharad ary ny synagoga; ny fandroana caliphal na ny mampikatso Alcazar an'ny mpanjaka kristianina.
Toy izany koa, any ivelan'ny tanàna misy anao ny sarotra Medina Azahara, iray amin'ireo tampon-tampona, eo akaikin'ny Alhambra any Granada, amin'ny maritrano silamo any Espana. Fa io kosa, ankoatr'izay, mandritra ny volana Mey dia mankalaza izany i Córdoba Antokon'ny Patios, nanambara Lova tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona, ary koa ny Fetibe miampita ny Mey.
Costa Rica, tanin'ny valan-javaboary voajanahary
Volkano Irazú, any Costa Rica
Nanova tanteraka ny karazan-dàlan-kizorana izahay mba hamita ny lisitry ny toerana halehantsika amin'ny Mey. Costa Rica dia miavaka amin'ny toetra mampientanentana azy. Manana porofo tsara an'izany ianao ao amin'ny tamba-jotra nasionaly, ny tendrombohitra sasany ary ny sasany eo afovoan'ny lemaka amoron-tsiraka.
Momba ny teo aloha, manoro hevitra anao izahay hahita ilay avy amin'ny volkano Arenal o ilay avy any Irazú, raha, raha ny segondra dia ny Cahuita, miaraka amin'ny vatoharan-dranomasina sy ny ala tropikaly mando; ilay avy any Barra Honda, miaraka amin'ireo lava-bato, na An'i Carara, miaraka amin'ireo hazo teratany.
Ity farany dia zato kilaometatra avy eo San José, ny renivohitry ny firenena. Ao anatin'izany dia azonao atao koa ny mahita tranobe neoklassical manankarena toy ny Castle of the Moor, ny Paositra sy Telegrafy na ny an'ny Teatra nasionaly, ary koa ny Katedraly Metropolitan ary ny fiangonan'ny ny famindram-po, ny fahatsapana ho irery ary ny Carmen. Raha te hahafantatra toerana hafa any Costa Rica ianao dia mamporisika anao izahay vakio ity lahatsoratra ity.
Ho famaranana, raha manontany tena ianao aiza no andehanana amin'ny may, Nasehonay anao ny toerana folo izay mamirapiratra indrindra amin'izany fotoana izany. Anjaranao ny safidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Aiza no haleha amin'ny volana Mey: Toerana 10 tsara indrindra